ပြည်တွင်းသတင်း | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
This entry was posted on June 23, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on June 23, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
This entry was posted on May 30, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on May 30, 2013, in ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
ပုဒ်မ-၁၄၄ ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ပိုင်း . တပ်မတော်မှ လုံခြုံရေး ယူပြီးနောက် လားရှိုးမြို့ မှာ တိတ်ဆိတ် ခြောက်ကပ်နေတယ်လို့ မြို့ ခံတဦးက Myanmar News Now ကို ပြောပါတယ်။ လားရှိုးမြို့မဈေးကြီးနှင့် ပျက်စီးနေသော ဆိုင်ခန်းများမှာ တပ်မတော်မှ လုံခြုံရေး ယူထားပြီး ၊ မြို့မဈေးကြီးကို ပိတ်ထားရပါယ်။ တစ်မြို့လုံးနီးပါး ဈေးဆိုင်ခန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း မရှိတော့ ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။Myanmar News Now
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့တွင် (၂၈-၅-၂၀၁၃) ရက်နေ့က
မွတ်စလင်မ်များရဲ့ နေအိမ်များနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အခြေခံ အဆောက်အအုံများအား
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများက ဦးဆောင်၍ အကြမ်းဖက် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်လို့
အကြမ်းဖက်မှုစတင် မြစ်ဖျားခံရာ အကြောင်းရင်းမှာ ဒေါ်အေးအေးဝင်းဆိုသူ
ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား ပုံတွင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း ရက်စက်စွာ မီးရှို့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်အေးအေးဝင်းအား အစောပိုင်းမှာတော့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသူတစ်ဦးလို့ ပြောခဲ့ကြပေမယ့် မဟုတ်မှန်းကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပြီး
ဒေါ်အေးအေးဝင်းမှာ မီးလောင်ဒဏ်ရာများ ပြင်းထန်စွာ ခံစားခဲ့ရပြီး လားရှိုးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင်
အရေးပေါ်လူနာအဖြစ် တင်ပို့ထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆေးရုံတက်ရောက် ကုသနေစဉ် ဒေါ်အေးအေးဝင်းမှာ သေဆုံးသွားခဲ့ရသည်ဟု
သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း အဆိုပါ သတင်းများမှာ
မှားယွင်းခဲ့ပြီး ယခုအချိန်အထိ အသက်ရှင်ဆဲဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒေါ်အေးအေးဝင်း၏ ဆိုးရွားသည့် ရောဂါဝေဒနာများအား
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများနဲ့နောက်လိုက် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက
ဆေးရုံတွင် သွားရောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီးနောက် မခံမရပ် ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒေါ်အေးအေးဝင်းအား မီးရှို့သူဟု သတင်းထွက်ပေါ်နေသူအား ထိန်းသိမ်းထားသည့်
ရဲစခန်းတွင် လူပေါင်းများစွာနဲ့အတူ ဘုန်းကြီးများက ၀ိုင်းခဲ့ပြီးနောက် မီးရှို့သတ်ဖြတ်သူ
တရားခံအဖြစ် စွတ်စွဲခံရသူအား ထုတ်ပေးရန် ရဲစခန်းတွင် တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုသို့ တောင်းဆိုနေရင်း နေ၀င်ချိန်ရောက်လာသည့်အခါ ဆေးရုံတင်ပို့ထားသည့်
အင်တာနက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီးနောက် အကြမ်းဖက်လိုသူများမှာ
ပိုမိုသွေးကြွလာပြီး၊ အကြမ်းဖက်မှုဆီသို့ ဦးတည်သွားပါတော့တယ်။
ဒေါ်အေးအေးဝင်း သေဆုံးသည်ဟု လိမ်လည်သတင်းများ ထုတ်ပြန်ထားစဉ်
ဒေါ်အေးအေးဝင်းကတော့ ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှု ခံယူနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
969 အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်း၏ တရားမ၀င် အကြမ်းဖဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ဆိုသူ
၀ီရသူကတော့ ၎င်းရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် တရားခံဖြစ်နေသူကို
၀ီရသူအား အစိုးရ တာဝန်ရှိသူ ဆက်သွယ်ရေးအင်ဖော်မာများက
အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းများအား ပံ့ပိုးပေးနေတာကြောင့်
ယခုလို တင်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ပုံတွင် မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း ဒေါ်အေးအေးဝင်းအား
ယခုလို ရက်စက်စွာ မီးရှို့ခဲ့သူကတော့…
ကိုနေ၀င်းဆိုသူ ကုလားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ အစောပိုင်းကတော့ ပန်ချာပီကုလားဟု
သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း အမှန်တကယ်တမ်းမှာမူ ဟိန္ဒူဘုရားကိုးကွယ်သည့်
ဂေါ်ရခါး ကုလားတစ်ဦးဖြစ်နေကြောင်း ပုံတွင် မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းဂေါ်ရခါးကုလား ကိုနေ၀င်းအား အစောပိုင်းက မေးမြန်းကြရာတွင် မွတ်စလင်မ်ဟုသာ တွင်တွင်ပြောနေခဲ့ပြီး၊
၎င်း၏ မှတ်ပုံတင်အား ရှာဖွေစစ်ဆေးရာတွင် ဂေါ်ရခါးကုလားဖြစ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရသော်လည်း…
မိတ္ထီလာမြိ့ကဲ့သို့ပင် ဗလီများ၊ ကျောင်းများနဲ့ လူနေအိမ်ဆိုင်ခန်းများကတော့
မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံလိုက်ကြရပြီးဖြစ်သလို၊ ကောလ ဟလ သတင်းများအရ မွတ်စလင်မ်ဟု
ပြောဆိုခဲ့သူ ကိုနေ၀င်းကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက
အတင်း အဓမ္မ ဂေါ်ရခါးမဟုတ်ကြောင်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ကြောင်း အစရှိသဖြင့်
ဖိအားပေး၍ ခိုင်းစေကြအုံးမည်လားလို့ မေးခွန်းများ မေးမြန်းလိုချင်နေကြပါတယ်။
This entry was posted on May 28, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on May 16, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
ခင်ဦးသာ| May 15, 2013
This entry was posted on May 16, 2013, in အင်တာဗျူး, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on May 6, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on May 6, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on May 5, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on April 26, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on April 22, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on April 19, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
Wednesday, April 17, 2013 AFP, Rohingya_News
TOKYO – Myanmar democracy icon Aung San Suu Kyi defended her conciliatory political style Wednesday, saying her focus was on buildingamore unified society rather than making headlines.
She said she has been addressing those issues, albeit in ways that people may consider “boring”.
“In fact, I have been speaking all the time about ethnic nationalities. But the point was that my statements were not colourful enough to please everybody,” she toldapress conference.
“Actually I am not very keen on colourful statements. I am sorry if people do not find my comments interesting enough to acknowledge them.
The comments came as activists express disappointment that Suu Kyi,aNobel laureate who was locked up for 15 years by Myanmar’s then-ruling junta, has remained largely silent about several episodes of communal bloodshed.
Suu Kyi said she has met with Muslim leaders and felt for their plight.
“It’s very sad because none of them had ever known any other country except for this one, except for Burma,” she said.
“They did not feel they belonged anywhere else and you are just sad for them that they are made to feel they did not belong to our country either. This isavery sad state of affairs.”
But, she said: “With regard to whether or not Rohingya are citizens of the country, that depends very much on whether or not they meet the requirements of the citizenship law as they now exist.
“Then we must go on and assess this citizenship law to find out whether it is in line with the international standard,” she said, stressing the importance of rule of law.
“We must learn to accommodate those with different views from ours,” she said.
“People like Aung San Suu Kyi who have moral authority in Myanmar should be clearer about the rights of minorities,” she said.
“She talksalot about the rule of law, but that is not enough. We must protect minorities. Rohingyas had hoped that she might improve their lot, but they are beginning to lose hope that she can play that role.”
“I have always said our country is poor in the culture of negotiated compromise. But it is something we must work at to achieve,” she said.
“I want changes in our country to be achieved through agreements between different forces in our country.”She said the current regime under President Thein Sein lackeda“structure” for its reform initiatives, such as the priority and sequence of what needs to be done.
Thursday, April 18, 2013 Al-Bawaba, Burma, Muslim, Rohingya News, Saudi Arabia
All human rights violations directly tied to the pipeline aside, the profits of the pipeline for Myanmar go to the government and ultimately fund those who this past summer Saudi Arabia condemned. One can’t help but wonder if the giant was sleeping at all, or perhaps whose bed it was sleeping
The Guardian, Thursday 18 April 2013 12.08 BST
Link to video: Burma’s Bin Laden, the Buddhist monk who fuels hatred
This entry was posted on April 15, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on April 10, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on April 10, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on April 10, 2013, in အထူးကဏ္ဍ, ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း, နိုင်ငံရေး.	Leaveacomment
This entry was posted on April 10, 2013, in ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment
This entry was posted on April 9, 2013, in ပြည်တွင်းသတင်း.	Leaveacomment